May 2022 - News 88 Post
माैन अवधिमा यसरी हुन्छ करोडौँ रकम खर्च ! बाडिन्छ पैसाकाे बिटाे ..
May 10, 2022 N88LeaveaComment on माैन अवधिमा यसरी हुन्छ करोडौँ रकम खर्च ! बाडिन्छ पैसाकाे बिटाे ..
काठमाडौँ । आज मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुन्छ । मतदान अघिको तीन दिन अर्थात् मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सबै काम बन्द हुन्छ । जानकारहरूका अनुसार मौन अवधि भनिए पनि यो समयमा कतिपय उम्मेदवारहरू मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न हर सम्भव प्रयास गर्छन् । चुनाव प्रचार प्रसारका लागि तोकिएको समयमा औपचारिक रूपमा प्रचारका काम गर्ने, […]
म सपना बाँड्न होइन, काम गर्न उम्मेदवार बनेको हो : नेत्री सिंह
May 10, 2022 N88LeaveaComment on म सपना बाँड्न होइन, काम गर्न उम्मेदवार बनेको हो : नेत्री सिंह
काठमाडाैं । पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनुभएकी सिर्जना सिंहले आफू सपना बाँड्न नभई काम गर्न महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बनेको बताउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘चुनावी सभा’मा उहाँले काठमाडौँको विकासका लागि आफूले ठूला सपना नबाँडेको बताउँदै आफूले अगाडि सारेको सङ्कल्प पत्रअनुसार काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । […]
पुण्य गाैतमकाे एमालेमा इन्ट्री
May 10, 2022 N88LeaveaComment on पुण्य गाैतमकाे एमालेमा इन्ट्री
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य पुण्य गौतम नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका छन् । भृकुटीमण्डपमा आयोजित चुनावी सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गौतमसहितलाई एमाले प्रवेश गराएका हुन् । उनले एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफूहरूलाई सुरुङमा छिराएका कारण एमाले प्रवेश गरेको बताए । काे हुन् सिर्जना सिंह ? भाेट दिनु अघि नै चिन्नुस् नेपाली राजनीतिमा लौहपुरुषको […]
निर्वाचन आयोगले ‘आरजु म्याडम’लाई सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
May 10, 2022 N88LeaveaComment on निर्वाचन आयोगले ‘आरजु म्याडम’लाई सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले बुधबार नेतृ राणाले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखाउने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । कैलालीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखिएको र गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताए त्यहाँका ४/५ जनालाई निःशुल्क रुपमा भिसा टिकट उपलब्ध […]
माधव नेपालले मागे सूर्य चिह्नमा भोट, तर कसका लागि ?
May 10, 2022 N88LeaveaComment on माधव नेपालले मागे सूर्य चिह्नमा भोट, तर कसका लागि ?
काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सूर्य चिह्नमा भोट मागेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको घटक नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेको सूर्य चिह्नमा मतदान गर्न अपील गरेका हुन् । मंगलबार महालक्ष्मी नगर कमिटीले गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो भनेका हुन् । उनले वास्तवमा झुक्किएर सूर्यमा मत मागेका हुन् । आफ्नो पार्टीको चिह्न कलम […]
मतदाता परिचयपत्र नभएकाले पनि भोट हाल्न पाउने, तर चाहिन्छ यी कागज
May 10, 2022 N88LeaveaComment on मतदाता परिचयपत्र नभएकाले पनि भोट हाल्न पाउने, तर चाहिन्छ यी कागज
काठमाडौं। वैशाख ३० गते देशैभर हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र नभएकाहरुले भोट हाल्न पाउने भएका छन् । नागरिकता भएका सबैलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनाएका छन् । मंगलबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले मतदाता परिचयपत्र साथमा नभएकालाई मताधिकारबाट वञ्चित नगरिने बताएका हुन् । भोट हाल्न मतदाता […]
प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको २४ घण्टे स्पष्टीकरण
May 10, 2022 N88LeaveaComment on प्रचण्डलाई निर्वाचन आयोगको २४ घण्टे स्पष्टीकरण
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । वैशाख २३ गते भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे आयोगले दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । मंगलबार नेपाली कांग्रेस(बीपी)ले प्रचण्डविरुद्ध मतदातालाई धम्क्याएको भन्दै उजुरी दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोले भनेको छ, ’यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षले आफ्नो […]
May 10, 2022 N88LeaveaComment on आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि, के गर्न पाइँदैन ?
काठमाडाैं । आजराति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । मतदानअगाडिको ४८ घण्टाको समयलाई मौन अवधि भनिन्छ । मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन । मौन अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिका सम्बन्धमा निगरानी राख्ने र मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि भएको पाइएमा सुरक्षा […]
मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि लागू हुँदै, के गर्न पाइन्छ के के पाइँदैन थाहा पाउनुस्
May 10, 2022 N88LeaveaComment on मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि लागू हुँदै, के गर्न पाइन्छ के के पाइँदैन थाहा पाउनुस्
काठमाडाैं । यही वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि लागू हुँदैछ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मौन अवधिमा प्रचार प्रसारलगाायतका गतिविधिमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेछ। आयोगका अनुसार यस अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न पाइने छैन। त्यसकारण चुनावी प्रचारका लागि मंगलबार अन्तिम दिन हो। अन्तिम […]
पाेखराबाट आयाे काँग्रेस र गठबन्धनलाई खुसीकाे खबर, एमालेमा खैलाबैला
May 10, 2022 N88LeaveaComment on पाेखराबाट आयाे काँग्रेस र गठबन्धनलाई खुसीकाे खबर, एमालेमा खैलाबैला
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा मेयर पदमा बागी उम्मेदवारी दिएका काँग्रेस नेता विमलबहादुर कार्कीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। पार्टीले पोखराको मेयर गठबन्धन दलमध्येको एकीकृत समाजवादीलाई दिएपछि उनले असहमति जनाउँदै मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएर चुनावी प्रचार–प्रसारमा जुट्दै आएका थिए । कार्कीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर गठबन्धनका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार बनेका धनराज आचार्य र कांग्रेसकी कोपिला रानाभाटलाई समर्थन […]